मेरो बारेमा वन मान्छेहरु वनझाँक्रीका कुरा सुन्छन् त मेरो के लाग्छ !-NepalKanoon.com
मेरो बारेमा वन मान्छेहरु वनझाँक्रीका कुरा सुन्छन् त मेरो के लाग्छ !
देखेको कुरा सोझो सोझो भन्न र लेख्न सक्ने पछिल्लो समयका चर्चित राजनीतिक र साहित्यिक टिप्पणीकार हरि अधिकारीका बारेमा धेरैलाई धेरै भ्रम र नियोजित रिसरागहरु छन् । उनका कुरा सुन्दा लाग्छ उनी आमन्त्रित दुश्मनीहरुसँग खेल्न पनि रमाउँछन् ।
लोकतान्त्रिक विचारका अधिकारी कम्युनिष्टजस्तो खरो कुरा गर्छन् र व्यक्तिगत रुपमा भने उदारवादीजस्तो सबैसँग उत्तिकै भिजेर कुरा गर्छन् । प्रस्तुत छ अधिकारीले नेपाल कानुन डट कमका लागि स्वागत
नेपाललाई दिनु भएका एकतर्फी वान वे लिखित प्रश्नहरुको वान वे जवाफ ।
प्रश्न : तपाईँ पत्रकार बिग्रेर साहित्यकार हुनु भएको कि साहित्यकार बिग्रेर पत्रकार हुनुभयो ?
जवाफ : मेरो हकमा भने पहिलोतिर बिग्रिएर दोस्रोतर्फ आएको अथवा दोस्रोमा बिग्रिएर पहिलोतिर फर्किएको भन्ने कुरा बिलकुलै अर्थहीन छ । म एउटातिर बिग्रिएर अर्कोतिर गएको नभई पत्रकारिता र साहित्यलाई संगसंगै लिएर आइरहेको छु ।
प्रश्न : जे भए पनि बिग्रिन चाहिँ बिग्रेरै मात्र मान्छे सबैले जान्ने चिन्ने र सफल हुँदो रहेछ कि के हो ? सबै सफलहरुका खराबीका खबर मात्र धेरै आउँछन् हिजोआज, आर्थिकदेखि चारित्रिक भ्रष्टाचारसम्म… ।
जवाफ : तपाईंले निकाल्नु भएको यो निचोडमा म सहमत छैन । तर सफल मानिसहरुका बारेमा नराम्रा खवर बढी फैलिने गरेको चाहिँ पक्कै हो ।
प्रश्न : त्यसो हो भने, मान्छे खासमा जेले सप्रिरहेको हुन्छ त्यसैलाई हामी बिग्रेको भन्छौँ कि ? के लाग्छ ?
जवाफ : तपाईंको यो प्रश्न प्रष्ट छैन ।
प्रश्न : ठीकै छ त्यो भए, प्रश्नलाई थप प्रष्ट नगरुँ, आफू चाहिँ साहित्य र पत्रकारितामध्ये केमा रहँदा बढी बरालिनु भयो ?
जवाफ : मैले तपाईँको प्रश्नलाई मैले सही बुझेकोभए म बरालिएकै छैन ।
प्रश्न : सन्तुष्टि चाहिँ केमा बढी पाउनुभयो ?
जवाफ : मैले साहित्य सिर्जनाबाट नै बढी सन्तुष्टि पाएको छु ।
प्रश्न : आनन्द चाहिँ ?
जवाफ : आनन्द पनि पत्रकारिताभन्दा साहित्यबाट नै लिने गरेको छु ।
प्रश्न : तपार्इँ बच्चादेखि नै अहिलेजस्तै प्रष्ट बोल्ने र छुच्चो हुनुहुन्थ्यो ?
जवाफ : म छुच्चो छैन र कहिल्यै पनि थिइनँ । हो पहिले देखि नै म प्रष्ट वक्ता रहँदै आएको छु ।
प्रश्न : अलि बढी कहिलेदेखि ?
जवाफ : यसमा बढीघटी भन्ने कुनै कुरो छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
प्रश्न : प्रष्ट र आक्रामक बोलाइ अनि लेखाइका फाइदा बढी छन् कि बेफाइदा ?
जवाफ : मैले मेरो लेखाइको शैलीलाई फाइदा र बेफाइदाको तराजुमा तौलेर बनाएको नहुनाले यो प्रश्नको जवाफ दिन असमर्थ छु ।
प्रश्न : जवाफ दिन असमर्थ हुनु र फाइदा बेफाइदा हुँदै नहुनु त फरक कुरा होला, फाइदा के के हुन् र बेफाइदा के के ?
जवाफ : प्रष्ट र सत्यवादिताका फाइदै–फाइदा छन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।
प्रश्न : अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सीधासीधा वा अर्को भाषामा ठाडो टिप्पणी गर्दा भएका केही घटना कृपया ?
जवाफ : केही मानिसहरु रिसाएको थाहा पाएको छु । तर मैले त्यसलाई कुनै उल्लेख्य घटनाको रुपमा लिएको छैन । आफ्ना कृतिको पाठकीय टिप्पणीलाई पनि पचाउन नसक्ने लेखकहरुका बारेमा कुरा गर्नु नै बेकार छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
प्रश्न : त्यसपछि आफूले आफैँलाई अलिक कम गरौँ कि यस्तो शैली भन्ने लागेन ?
जवाफ : अहँ लागेन । मैले व्रह्मले देखेको कुरा लेख्दा यसले निम्त्याउने टिप्पणीको बारेमा कुनै वास्तै नगर्ने हुनाले मलाई मेरो शैलीमाथि पुनर्विचार गर्ने सोच कहिल्यै आएन ।
प्रश्न : तपाईँका कमजोरीहरु साहित्यिक सिर्जना र व्यवहारमा फरक छन् कि एउटै ?
जवाफ : कमजोरीहरु साहित्यिक सिर्जना र व्यवहारमा फरक छन् कि एउटै भनेको नै मैले बुझिनँ । मेरा सिर्जनामा कमजोरी छन् र व्यवहारमा पनि म त्रुटिरहित छु भन्दिनँ । तर कमजोरीहरुका स्वरुप फरक फरक छन् ।
प्रश्न : तपाईँ आफ्नो कमजोरीलाई नै सबल रुपमा प्रस्तुत गरेर त्यसैलाई आफ्नो बलीयो पक्ष बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनियो भने सही हुन्छ ?
जवाफ : हुँदैन । कमजोरीलाई सवल रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिदैन । गर्न सकिएको जस्तो लागेपनि त्यो एक न एक दिन उदाङ्ग हुन्छ ।
प्रश्न : तपाईँलाई मैले यौनका प्रश्न पनि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ?
जवाफ : लागेको छैन । यस विषयमा कुरा गरेर रोमान्टिक देखिइन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन ।
प्रश्न : लागे वा नलागे पनि भाग्न वा नभाग्न सकिन्न नि हैन ?
जवाफ : तपाईंले प्रश्न गर्नु भएको भए त मैले जवाफ दिनै पथ्र्यो ।
प्रश्न : भाग्नु परेको छ सोझो यौन प्रस्तावबाट कहिल्यै यहाँले ?
जवाफ : त्यस्तो रमाइलो प्रस्तावको साक्षात्कार गर्न अहिलेसम्म पाएको छैन ।
प्रश्न : भगाउनु भएको छ कसैलाई ?
जवाफ : छैन ।
प्रश्न : साहित्यिक पुरस्कारहरुको छनौट र वितरण एकदम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निष्कलंक छ भन्न सक्नुहुन्छ ?
जवाफ : त्यसको ठिक्क उल्टो छ भन्न चाहिं निर्धक्कसंग सक्छु ।
प्रश्न : पुरस्कारले लेखक बनेका छन् कि लेखक बनेर पुरस्कृत भएका छन् बढी ?
जवाफ : पुरस्कारले लेखक बन्न सक्दैनन् । पुरस्कृत भएकाहरु मध्ये पनि अधिकांश लेखकै बनेर भन्दा अरु धेरै कुरा बनेर भएका छन् ।
प्रश्न : सुधार, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी वा संयन्त्र केही हुन सक्ला ?
जवाफ : साहित्यको गुणात्मकतामा अभिबृद्धि गर्न परिमार्जन, पुनर्लेखन, सुधार र प्राकमूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । यस दिशामा सानो प्रयास म गर्दैछु । केही समयपछि यस बारेमा विस्तृत कुरो गर्नुपर्दा तपाईंसंग नै गरौंला ।
प्रश्न : अर्को सन्दर्भ प्रत्यक्ष राजनीतिमा भोट नै मागेर नेता बन्ने दिन आउँछ यहाँको ?
जवाफ : यस बीचमा कुनै धेरै ठूलो दुर्घटना भएन भने म भोटको भीख माग्दै जनताको घरदैलामा पुग्ने चाहीं गर्दिन होला यस जुनीमा ।
प्रश्न : राजनीतिलाई गाली मात्र गर्ने अनि सुधारका लागि आफैँ चाहिँ केही नगर्ने यहाँको काइदा ठीक भइरहेको छ र ?
जवाफ : तपाईं गाली भन्नुहोस् वा अरु केही, मैले राजनीतिक सुधारमा जोड दिंदै जे जस्ता कुराहरु लेखेर जनतालाई सुसूचित गराइरहेको छु त्यो काइदालाई बेठीक भन्न मिल्दैन ।
प्रश्न : अहिलेसम्म राजनीतिक टिप्पणीहरु लेखेर त्यसको प्रभाव एक पटक पनि नीतिगत तहमा परेको पाउनु भएको छ ?
जवाफ : धेरै पटक । खासगरी प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय विषयहरुमाथि गरिएका टिप्पणीहरुले नीतिगत तहमा प्रभाव पारेको बुझेको छु ।
प्रश्न : तर जति लेखे पनि के हुन्छ र सुन्नु पर्नेले नसुन्ने अनि लेखेर मात्र के हुन्छ र भनेको पनि पटक पटक सुनिएकोछ, के त्यस्तै लाग्दैन ?
जवाफ : कहिलेकाहीं त्यस्तो पनि लाग्छ तर सचेत गराउन सक्नेगरी लेखिएको कुनै पनि कुरा खेर नै जान्छजस्तो चाहिं लाग्दैन ।
प्रश्न : अहिलेका पत्रकारहरुप्रति गुनासो टिप्पणी सुझाव केही छ ?
जवाफ : अहिलेका पत्रकार साथीहरुले असाध्यै कमजोर भाषामा समाचार लेख्छन् । तथ्यहरु, नामहरु र अंक समेत त्रुटिपूर्ण ढङ्गले उल्लेख गरिएको देख्छु । एकथरी मानिसहरुका बारेमा लगातार चर्चा गरिरहने र अर्कोथरी चर्चायोग्यलाई भने वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिपनि विकसित भएको पाउँछु पत्रकारिताको संसारमा ।
प्रश्न : ऊ बेलाको पत्रकारिताको शैली अलिकति सम्झिदिनुस् न ।
जवाफ : ऊबेलाको भनेर २०४६ सालको जनआन्दोलन भन्दा पहिलेको पत्रकारिताको कुरा गर्न खोज्नु भएको हो भने त्यतिबेला प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पत्रकारिताको पनि मिसन थियो । सबै कुरा त्यही मिसनबाट निर्देशित हुन्थ्यो । पत्रकारिताको रुपमा मेरो अभ्यूदय पनि मिसन पत्रकारिताबाट नै भएको हो । त्यसबाहेक हामी भाषाको शुद्धता र तथ्यको सत्यापनपट्टी पनि बढी नै सचेत रहने गर्दथ्यौं ।
प्रश्न : अब, राजनीतिक सन्दर्भ चुनाव होला ?
जवाफ : चुनाव हुन्छ, हुनुपर्दछ ।
प्रश्न : चुनाव चाहने र नचाहने को को ?
जवाफ : म र म जस्ता संविधान निर्माणका लागि एउटा जनअनुमोदित संस्था अनिवार्य छ भन्ने मान्यता राख्ने सबै नेपाली चुनाव चाहने र अन्योल र अस्थीरता कायमै राखेर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने जनविरोधीहरु चाहीं चुनाव नहोस् भन्नेहरु हुन् ।
प्रश्न : भएन भने चाहिँ कसको कारणले नहोला ?
जवाफ : अन्योल र अस्थीरताका एजेण्टहरुका कारणले चुनाव नहुन सक्छ ।
प्रश्न : भयो भने बहुमत कसको ?
जवाफ : पूर्ण बहुमत त म भन्न सक्दिन । बिना डरत्रास जनताले भोट हाल्न पाए भने यस पटक नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा चुनिएर आउनेछ।
प्रश्न : ठूलो सानो जो जो भए पनि त्यस संविधान सभाले संविधान बनाउला ?
जवाफ : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रवादी शक्ति एकगठ हुँदा पूर्ण बहुमत हुने स्थिति भयो भने त्यतिबेलाको संविधानसभाले संविधानको निर्माण गर्नेछ ।
प्रश्न : नत्र के होला ?
जवाफ : त्यो ठूलो दुर्भाग्यको विषय हुनेछ । मुलुकमा कुनै एउटा स्वरुपको तानाशाही आउने सम्भावना बढेर जानेछ ।
प्रश्न : बनेमा संघियता कस्तो बन्ला ?
जवाफ : जातीय पहिचानको आधारमा नभएर भूगोल, संस्कृति र सामथ्र्यका आधारमा खडा हुने संघियता लागू हुनुपर्दछ ।
प्रश्न : संघियतामा साहित्य, त्यसमा पनि नेपाली भाषाको साहित्य विकासमा नकारात्मक असर पर्छ ?
जवाफ : संघियताले साहित्यमा खासै सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
प्रश्न : अब बाँकी जीवनका लागि कार्ययोजना के के छन् ?
जवाफ : म साहित्यकै क्षेत्रमा रहने छु ।
प्रश्न : सालिक बनाउनु पर्ला कि कतै ?
जवाफ : पर्दैन ।
प्रश्न : पछिल्लो पुस्ताले के भनेर सम्झिएलान आफूलाई जस्तो लाग्छ ?
जवाफ : एउटा कवि र आम नेपाली मानिसको प्रतिनिधि आवाजका रुपमा मेरो सम्झना गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दछ ।
सामाजिक सञ्जालबाट आएका प्रश्नहरु :
प्रश्न : Laxmi Tamang नेपालीहरुको मानसिक भ्रष्टताको मुख्य कारण के हो जसका कारण मल्लकाल देखिको त्यस्तो राम्रो सामाजिक आर्थिक सम्पन्नता जबकि भूपरिवेष्ठितालाई मात्र जवाफका रुपमा दोष दिएर उम्कन पाइन्न । सरकार किन भ्रष्टहरुलाई साँच्चै जेल हाल्न सक्तैन केही दिन बसेर उनीहरु निस्किहाल्छन् ?( लक्ष्मी जी यूरोपमा रहेछ विद्यावारिधीरत हुनुहुन्छ )
जवाफ : कुनैपनि समाजमा भ्रष्टाचार र अव्यवस्था फैलिनुमा केही राजनीतिक, केही सामाजिक र केही नैतिक कारणहरु हुन्छन् । हाम्रो समाजको विकास प्रक्रियामा आएको असन्तुलन, कमजोर विधिको शासन र दण्डहिनताले भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई मौलाउन सहयोग गरेका छन् । धेरै वर्षसम्म निरंकुशतामा जकडिएको र त्यस समयमा एउटा वर्गलाई कानुनभन्दा माथि राखिएको हुनाले प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा पनि शासन गर्ने वर्गले त्यही पुरानो शासक वर्गको शैली अपनायो जसले गर्दा भ्रष्टाचार राष्ट्रिय संस्कार बन्न पुग्यो ।
प्रश्न : बिम्मी शर्मा (विम्मी जी वीरगञ्जमा रहेका लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनु भएकी इमानदार पत्रकार महिला मानिनुहुन्छ) नेपालमा पत्रकारको बौद्धिकता बढाउन के गर्नु पर्छ ? किन यिनलाई कुनै कानुनले छुँदैन ?
जवाफ : पत्रकारलाई कानुनले छुदैंन भन्ने होइन । पत्रकारिताहरुको बौद्धिकता बढाउन उनीहरुलाई विषयगत उच्चशिक्षा दिलाउने तालिम आदिबाट उनीहरुको सीप विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।
Ghanendra Ojha नेपालीहरु आफ्नो बाहेक अरुको कुरा किन धेरै जान्दछन् ? जवाफ पाए आभारी हुन्थेँ (प्रश्नकर्ता ओझा पत्रकारिता प्राध्यपनरत साहित्यिक व्यक्तित्व कन्दरा प्रकाशनका प्रकाशक हुन् )
जवाफ : नेपालीहरु मात्र होइन संसारका सबै जातिका मानिसहरु आफूलाई बाहेक अरु सबैलाई राम्ररी जान्दछन् । पूर्वीय दर्शनले त्यसै कारण भनेको हो– पहिले आफूलाई चिन ।
Bibek Adhikari नेपाली समालोचना पद्धतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
जवाफ : समालोचना पद्धति नेपाली वा विदेशी हुँदैन । क्षीर–नीर–विवेकी समालोचना पद्धति नै सबैभन्दा राम्रो पद्धति हो ।
प्रश्न : Shiva Hari Bankaila हरि अधिकारीलाई समीक्षाको सैद्धान्तिक ज्ञान सम्म पनि छैन के को समिक्षक ? मेरो नामै उल्लेख गरेर भनिदिए हुन्छ ।
जवाफ : बनकाँइलाजीलाई हरि अधिकारीले समालोचना सिद्धान्तको स पनि जानेको छैन भन्ने कुरा कुनै बनझाँक्रीले भनिदिए जस्तो छ । समालोचनाको सिद्धान्तका ठेली नपल्टाइकनै आफूले पढेको किताव वा कुनै कृतिको बारेमा समिक्षात्मक टिप्पणी गर्ने हक र योग्यता म संग सुरक्षित छ ।
प्रश्न : Damodar Adhikari सूचनाको हक पाउने अधिकार जनतालाई भन्दा आफूलाई बढी छ भनेर पत्रकारहरु सोच्छन्, यसमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?
जवाफ : सूचनाको हकसम्म जनताको बढी भन्दा बढी पहुँच पुर्याउन सकियो भने यो अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।
प्रश्न : Damodar Adhikari ड्ड नेपालका जुन सुकै media कुनै न कुनै दल प्रती झुकाव राखछन् । यो कुराको महसुस वहालाई कतिको छ ?
जवाफ : मिडिया हाउसहरु दल वा समूहमुखी भन्दा आमजनतामुखी हुनु आवश्यक छ ।
प्रश्न : Ma Chapagain आजको बिग्रिएको राजनीतिक अवस्थाको मिलन विन्दु के हुन सक्छ ?
जवाफ : सबैथरी राजनीतिक शक्तिहरुले वर्षौंदेखि कचल्टिएर रहेका संवैधानिक र राजनीतिक समस्याहरुको समाधान खोज्न राष्ट्रिय एजेण्डामा एकमत हुनसकेमा त्यो नै राजनीतिक समाधानको मिलनविन्दु हुनसक्दछ ।
प्रश्न : Kumar Bhattrai अरुको धेरैजसो नराम्रो मात्र देख्ने हरि अधिकारीज्यूले सबैथोक राम्रो मात्र भएको आफ्नो कृति कहिले निकाल्नु हुन्छ ?
जवाफ : …
प्रश्न : Madhav Adhikari तपैले सोतंत्र पत्रकारिता, साहित्यिक इमान्दारिता, कुटनीतिक बिस्लेसन समेत को सयोजन गरेर आफू सल्लाहकार भएकाबेला मन्त्री प्रधन्मत्रिलाई दिने सल्लाह मा कसरि रुपान्तरण गर्नु हुन्थयो र?
जवाफ : म सल्लाहकार भएका बेलाको फजिति सम्झन चाहन्न ।
प्रश्न : नाम उल्लेख नगर्ने भन्दै आएको प्रश्नं स्त्रीका रचना सबै राम्रा पुरुषका नराम्रा भनेर समीक्षा गर्ने यहाँको मनोविज्ञान नै त्यस्तो हो कि हुने नै त्यस्तो रहेछ ?
जवाफ : म यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दछु ।
प्रश्न : Madhusudhan Pandey हरि अधिकारी अल्छी समालोचक हुन ।अरूका कृति पढदैनपढी समालोचना लेख्छन भूमिका पढेका भरमा भन्ने आरोप छ के भन्नुहुन्छ ?
प्रश्न : Sailendra Thapa एउटा राजनीतिक विश्लेसकको नजरमा भोलिक नेपाल कस्तो देख्नु हुन्छ र?
प्रश्न : श्रीजन श्री दाजू , हरी अधिकारी अनुहारमा लागेको धुलो पुछ्न छोडि ऐना पुच्छु भन्छन् नि कसै कसैले, के भन्नु हुन्छ उनीहरुलाईरु ?
प्रश्न : Bhumi Raj Bastakoti असल समालोचकले हार्दितापूर्वक उपहार आएका पुस्तकको मात्र समीक्षा गर्छ कि बजारमा आएका पुस्तक आपैmले खोजेर पनि गर्छ !
प्रश्न : Prakash Silwal हरि दाई श्रवण मुकारुङको विसे नगर्चीको बयानलाई कविता मान्दिनँ भनेको पढियो । भनेपछि कस्ता कवितलाई ९उदाहरणसहित० हामीले कविता मान्नुपर्ला दाई रु (सिलवाल, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष र रासस सम्बद्ध पत्रकार हुन् )
जवाफ : मैले बिसे नगर्चीको बयानलाई कविता होइन भनेको छैन । हो त्यो कविता मलाई मनपर्ने कविता चाहीं होइन । त्यही कुरो मैले नयाँ पत्रिकालाई भनेको हुँ । सिलवालजी मलाई कुनै कविता मन परेन भने मन नपर्न त पाउनु पर्छ नि होइन र ?
प्रश्न : Nilkantha Thapaliya कस्ता कस्ताले कसरी देश बनाउन सक्छन ? त्यसरी सक्ने लाई कसरी त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ र ?